Goltec Microelectronics ရှန်ဟိုင်း စတော့အိတ်ချိန်း IPO ကိုအတည်ပြု ခဲ့သည် – Pandaily
Dec 31, 2021, 17:07ညနေ 2022/01/06 23:10:50 Pandaily
တရုတ်နိုင်ငံ၏ acoustic, optical နှင့် microelectronics လုပ်ငန်းများတွင် ဦး ဆောင် သူ Goltec က ကြာသပတေး နေ့တွင် ကြေငြာ ခဲ့သည်လက်အောက်ခံ Goer Microelectronics IPO ကိုလက်ခံ ခဲ့သည်ရှန်ကျန်း စတော့အိတ်ချိန်း ၏ GEM တွင် အင်္ဂါနေ့က စာရင်းဝင် ခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် Goltec Microelectronics ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လတွင် Goltec သည် ကုမ္ပဏီ၏ ၈၅. ၉% ကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ Goer Microelectronics သည် micro-electromechanical systems (MEMS) ထုတ်ကုန်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းချ မှုကို အထူးပြု သည့် semiconductor ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီ ၏အဓိက ထုတ်ကုန် များတွင် MEMS မိုက်ခရို ဖုန်း များ၊ MEMS အာရုံခံ ကိရိယာများ၊ မိုက်ခရို စနစ် module များ၊ အများအားဖြင့် စမတ်ဖုန်း များ၊ စမတ် ကြိုးမဲ့ နားကြပ် များ၊ ၀ တ်ဆင် နိုင်သော ထုတ်ကုန်များ၊ မော်တော်ယာဉ် အီလက်ထရွန်း နစ် နှင့်အခြား နယ်ပယ် များ တွင်အသုံးပြုသည်။
စွမ်းဆောင်ရည် ပိုင်း အရ ၂၀၁၈-၂၀၂၀ နဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက် အတွင်း Goltec Microelectronics ရဲ့ ဝင်ငွေ ဟာ ယွမ် ၁. ၉ ဘီလျံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ၉၈ သန်း) ၊ ၂. ၆ ဘီလျံ ၊ ၃. ၂ ဘီလျံ နဲ့ ၁. ၃ ဘီလျံ တို့ ဖြစ်ပြီး အသားတင် အမြတ် ဟာ ယွမ် ၃ ၅၆ သန်း၊ ယွမ် ၃ ၀၉ သန်း၊ ၃ ၇၈ သန်း နဲ့ ယွမ် ၁၅၈ သန်း တို့ ဖြစ်တယ်လို့ ကုမ္ပဏီ ရဲ့ အလားအလာ အရ သိရပါတယ်။
ယခင်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော spin-off အစီအစဉ် အရ Goltec Microelectronics သည် MEMS နှင့် microsystem module များ၏ သုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းချ မှုများတွင်ပါ ၀ င်သည့် Goltec လက်အောက်ရှိ တစ်ခုတည်းသော ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် spin-off ပြီးနောက် မိခင် ကုမ္ပဏီနှင့် ယှဉ်ပြိုင် မှုမရှိပါ။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Goltec Microelectronics သည် Shenzhen Stock Exchange တွင် စာရင်းဝင် ရန်စီစဉ် နေသည်
Goltec Microelectronics မှ ထုတ်ဖော်ပြသ သည့် အလားအလာ ကဤ အချိန်တွင် ထုတ် ပေးသော အစုရှယ်ယာ အရေအတွက်သည် အစုရှယ်ယာ ၇၉. ၃၇ သန်း ထက်မ ကျော်လွန် ကြောင်းဖော်ပြသည်။ အရောင်းအ ၀ ယ် မှရရှိသော ရန်ပုံ ငွေများကို စမတ် အာရုံခံကိရိယာ microsystem module များ၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း (အဆင့် ၁) အတွက် ယွမ် ၁. ၁၅၃ ဘီလီယံ၊ MEMS အာရုံခံကိရိယာ ချစ်ပ် များနှင့် module များ၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ယွမ် ၁. ၁၅ ဘီလီယံ နှင့် MEMS မိုက်ကရို ဖုန်း များနှင့် module များ၏ အဆင့်မြှင့်တင် မှုအတွက် ယွမ် ၈ ၈၈ သန်း အတွက်အသုံးပြု လိမ့်မည်။